I-china DuoDuo folding bag trolley DX3015 Lightweight Aluminium Collapsible and Portable Fold Up Dolly umkhiqizi kanye nomthengisi | UDuoduo
I-DuoDuo folding trolley trolley DX3015 Lightweight Aluminium Collapsible and Portable Fold Up Dolly
Usayizi Ovuliwe: 27.5x31x95CM
Usayizi Ogoqiwe: 39.5x27x8.5CM
Plate Usayizi: 27x22CM
Amandla: 20 AmaKh
Iphakheji: 10pcs ibhokisi ngalinye
Usayizi webhokisi: 55x42x29CM
Inqola yemithwalo esongekayo emincane, ilula kakhulu futhi inggoqeka, ingafakwa kubhaka wakho.
Isitayela sangaphandle esiyinkimbinkimbi esifaka imigqa ehlanzekile nenhlangano efihliwe.
Imithwalo yesikhwama sokusekela eguquguqukayo futhi ivimbela ukuguquka.
Amasondo amakhulu amangelengele wokusingathwa okuthuthukile.
Imichilo yokusekela ilula icishe iphindwe kabili ubude bayo ukubamba imithwalo yesayizi ehlukahlukene.
Okugoqekayo ukuthuthwa okulula nokugcinwa. Ifakwa kufolda yesikhala esincane.
Yenza Umsebenzi Wakho Wokuhambisa Ube lula: Amasondo amangelenge aminyene aqinile futhi athule kakhulu okwenza ukuphatha nokuqhuba inqola kube lula.
Izintambo Zokunwebeka: Izintambo ezinde ezakhelwe ngaphakathi ze-Bungee Zolulela cishe kubude obuphindwe kabili bokubamba imithwalo yobukhulu obuhlukahlukene. Imichilo yokusekela eguquguqukayo ihange umthwalo futhi uvimbele ukuguquka. Isisekelo senziwe ngezinto eziqinile futhi eziqinile ukuhambisa imithwalo, amaphasela, amabhokisi ngokuphepha.
Ngabe usalimaza ukuthi umthwalo usinda kakhulu? Ngabe usakhathazwa yimithwalo eminingi ohambweni lwebhizinisi? Usacasulwa ukuhlupheka kokuthenga ezitolo? Udinga le nqola mini ephathekayo esebenza kalula, ukugoba okulula bese ufaka ubhaka wakho.
Ngokuya ngesikhumulo sezindiza kanye nezindiza ezindiza ngazo, kungadingeka ukuthi uhlole inqola yakho yemithwalo namapotimende akho. Uma ungahleleli ukubheka noma yiziphi izikhwama, uzofuna ukuqinisekisa nenkampani yakho yezindiza ukuthi inqola izovunyelwa yini njengezinto zokuthwala. Ukuze wenze ukuhamba kancane kube lula, ungahle uthande ukucabanga ngokuthola inqola yemithwalo esongekayo. Lezi zinto zenza ukuthi ukuhamba kwezinto kube lula kakhulu. I-Compact Folding Cartage Sturdy, ukwakhiwa kwesisindo esincane, iyavula futhi ivalwe ngemizuzwana inikeze ukuhamba okulula. Amasondo amangelengele aphakeme ngokwedlulele ekuphatheni okuthuthukile Imithwalo yesikhwama sokwesekwa okusekelwayo eguquguqukayo futhi ivimbela ukuguquguquka Ngokuphepha kuthutha imithwalo, amabhokisi, amaphasela.
Langaphambilini I-DuoDuo esonga umthwalo wenqola DX3013 enamasondo ephathekayo Heavy Duty Aluminium Collapsible Lageage Cart
Olandelayo: I-DuoDuo Heavy Duty Hand Truck LH5001 Dual Handle Hand Iloli
I-DuoDuo Songa imithwalo yemithwalo DX3009
DuoDuo amaseviyethi wemithwalo ye-DX3005 ene-Add ...
DuoDuo amaseviyethi umthwalo Sibona DX3002 amaseviyethi D ...